Ogaden News Agency (ONA) – Isu-Duwaha Jaaliyadaha Pacifica oo La Shiray Hawl-wadeenka Dhalinyarada OYSU faraca Pacifica
Isu-Duwaha Jaaliyadaha Pacifica oo La Shiray Hawl-wadeenka Dhalinyarada OYSU faraca Pacifica
Posted by ONA Admin	/ December 3, 2014
Tariikhdu markay ahayd 2/12/14 waxaa khadka isgaarsiinta kulan muhiina ku wada yeeshay isuduwaha jaaliyaadka s ogaadeeniya ee Pacifica halgame Adan cabdiraxman (adan dakhare) iyo madaxa waaxda ururada bulshada ee S.Ogaadeeniya iyo xoghayaha guud ee ururka OYSU halgame Jamaal ugaas Xukun iyo halwadeenka dhalinyarada OYSU ee Pacifica.
Shirka waxaa lagu furay aayada quraanka kariimka ka dibna waxaa hadal mahad celin iyo bogaadina ka soo jeediyay isuduwaha jaaliyaadka Ogaadeeniya ee Pacifica isaga oo war bixin ka siiyay halka uu maraayo xaalka dadka iyo dalka Ogaadeeniya ee gumaysigu ragaadiyay. Intaa ka dib waxaa la guda galay ajandihii shirka oo war bixino laga dhagaystay hawlaha ururka ay masuulka ka yihiin waxaana masuuliyiintii halkaa ka hadlay ka mid ahaa halgame Yaxye sheekh Cabdi oo ah xiriiriyaha ururka OYSU Pacifica oo ka warbixiyay hawlaha ay qabteen dhalinyaradu iyo waxa u qorshaysan ee horyaala inay qabtaan. Warbixintaa ay soo gudbiyen dhalinyarada ayay aad ugu diirsadeen masuuliyiintii warbixta dhagaysanayay taasoo muujinaysa firfircoonaanta iyo dhiiranaanta ay dhalinyaradu muujiyeen, anagoo ogsoon inay yihiin dhalinyaradu mustaqbalkii barito hanan lahaa xornimada aan geediga u jirno.
Waxaa isna hadal qiimo badan halkaa ka soo jeediyay xoghayaha guud ee OYSU halgame Jamaal oo ku dheeraaday ujeedada ururka loo aasaasay iyo waxa looga gollahaa in la mideeyo cududa dhaliyarada Ogaadeeniya ee ku baahsan caalamka iyo faaiidada ay dadkooda gumaysigu duleeyay u qabtaan iyagoo cod u ah shacabka Ogaadeeniya fagaare walba oo caalamkana la taagan inay u gudbiyaan qadiyada Ogaadeeniya iyagoo adeegsanaya luqadaha caalamka. Wuxuu Xoghayaha sheegay inay dhalinyarada u noqdeen garab iyo gaashaan halganka ay JWXO hagaaminayso ee lagu xoraynayo dalka Ogaadeeniya.
Waxaa kaloo goobta hadal qiimi leh ka jeeday mudane Xikam oo ah khabiir mudo soo hogaaminiyay jaaliyada Victoria kana mida masuuliyiinta JWXO. Waxaa kaloo hadal u soo jeediyay madaxa waaxda ururada bulshada Ogaadeeniya halgame Ahmed Ayuub oo ka warbixiyay sida ay u halgalaan ururada bulshada Ogaadeeniya iyo kaalinta muhiimka ay kaga jiraan wacyi galinta bulshada.
Shirkan oo ahaa mid lagu dardargalinayo dhalinyarada ayaa waxa gabagabadii hadal dardaaran ka soo jeediyay isuduwaha Pacifica ee jaaliyadaha Ogaadeeniya mudane Aadan dakhare oo kula dardaarmay dhamaan halwadeenkii OYSU inay sii labanlaabaan hawlaha halganka una hiiliyaan dadkooda iyo dhulkooda uu gumaysiga hagaasiyay. Wuxuu yidhi; “Waa inaad ka faaiidaystaan xaaladan kala guurka iyadoo gumaysiga uu sii daciifayo qarkana u saaran yahay inuu kala dhaqaaqo halgankii shacabka S.Ogadenyana uu nasrigii Alle helay oo uu maalinba maalinta ka danbaysa kor u sii bulaalayo.”
Guul iyo Gobanimo ayuu ku soo afjarmay shirka.